आयरल्याण्ड भिसा आवश्यकताहरू के के हुन्? - ALinks
आयरल्याण्ड यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ? यसका लागि तपाईलाई भिसा चाहिन्छ। आयरल्याण्ड छुट्टी बिताउने ठाउँ हो। प्रत्येक वर्ष धेरै पर्यटक आयरल्याण्ड भ्रमण गर्छन्। मोहरको चट्टान जस्ता प्राकृतिक आश्चर्यहरूले विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। त्यसोभए, आयरल्याण्डको लागि भिसाको लागि कसरी आवेदन दिने भनेर छलफल गरौं। आयरल्याण्ड भिसा आवश्यकताहरु के हो?
आयरल्याण्डका आगन्तुकहरूसँग विभिन्न राष्ट्रियताहरूको लागि फरक आवश्यकताहरू छन्। त्यसोभए तपाईंले भारतबाट आयरल्यान्डको यात्रा गर्दा तपाईंले जान्न आवश्यक पर्ने कुराहरू यहाँ छन्।
अनलाइन सारांश पाना:
तपाइँले मितिसँग तपाइँको चिन्हको साथ एक सारांश पाना बुझाउनु पर्छ। यसको फोटोकपीको आवश्यक छैन।
रिपब्लिक अफ आयरल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डमा जानको लागि, तपाईंलाई वैध राहदानी चाहिन्छ। आफ्नो एयरलाइन वा ट्राभल एजेन्टसँग जाँच गर्नुहोस् कि कुन फारमको ID यात्रा गर्नु अघि आवश्यक छ।
तपाईलाई दुईवटा मूल राहदानीहरू आवश्यक पर्नेछ जसमा कम्तिमा २ खाली भिसा पृष्ठहरू छन्। यो आयरल्याण्डबाट तपाईंको प्रस्थान मिति पछि कम्तिमा छ महिनाको लागि मान्य हुनुपर्छ।
कृपया तपाईंको साथमा राहदानी, भिसा, र स्ट्याम्पहरूको बायो पृष्ठको फोटोकपी बोक्नुहोस्। यदि तपाईंसँग अन्य पासपोर्टहरू छन् वा अघिल्लो पासपोर्ट छन् भने, तपाईंले उनीहरूको लागि आवेदन दिनै पर्छ।
यदि तपाईं त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले कुनै पनि सम्बन्धित पुलिस रिपोर्टहरूको साथमा लिखित स्पष्टीकरण प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ।
भर्खरको तस्बिरसँग मिल्दोजुल्दो छ आवश्यकता को विवरण.
बेलायतमा बस्नको लागि तपाइँको अनुमति को प्रमाण। निवास प्रमाण कुनै पनि स्ट्याम्प, स्टीकर, वा निवास कार्ड हुन सक्छ। यो कम्तिमा months महिनाको लागि मान्य हुनुपर्छ तपाईको आयरल्यान्डबाट प्रस्थानको मिति पछि।
हुलाक अनुप्रयोगहरूको शुल्क लिईरहेको छ। यो आयरिश दूतावासलाई भुक्तानी योग्य हुलाक आदेश वा बैंक ड्राफ्ट मार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ। फोटोकपी आवश्यक छैन।
तपाईको भ्रमणको कारणलाई विस्तृत रूपमा विस्तृत रूपमा लेखेको पत्र। छुट्टी जस्तै, परिवार / साथीहरू भेट्न, इत्यादि। एक फोटोकपी बोक्नु आवश्यक छैन।
तपाईंले आफ्नो बसाईको आरक्षणको कन्फर्मेसनको हार्ड कपी बुझाउनु पर्छ। यो होटल वा गेस्टहाउसमा तपाईंको बुकिंगको लागि बिल हुन सक्छ। बिलको हार्ड प्रतिलिपिमा तपाईंको नाम र तपाईंको बसाई सटीक मिति हुनुपर्दछ।
(b) यदि सन्दर्भको साथ रहदै छ भने:
(i) अपडेट गरिएको मूलले आयरल्याण्डमा तपाईंको सन्दर्भबाट एक आमन्त्रित पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो। यसले तपाइँ रहनुभएको ठेगाना समावेश गर्नुपर्दछ।
(ii) तपाईंको सन्दर्भको लागि राहदानीको प्रतिलिपि - र यदि एक गैर- EEA राष्ट्रियसँग तिनीहरूको हालको आयरिश इजाजतपत्रको प्रतिलिपि छ।
(iii) कसरी तपाइँ तपाइँको सन्दर्भ थाहा छ, वा यो कसरी यो सम्बन्धित छ को विवरण। समर्थनको प्रमाण यदि आवश्यक छ भने।
तपाईको यात्राको लागि वित्तपोषण गर्ने र आफैंलाई सहयोग पुर्‍याउने योजनाको प्रमाण। तपाईंले आफ्नो वित्तीय विवरणहरू प्रदान गर्नुपर्नेछ। अप टु डेटको रूपमा, तपाईंको भ्रमणको अवधिको लागि। बैंक स्टेटमेन्ट तुरून्त तपाईंको visit महिनाको लागि भ्रमण अघि देखाइन्छ।
बैंक स्टेटमेन्टहरूले अनुरोधको मिति सम्म सब भन्दा भर्खरको खाता लेनदेनहरू समावेश गर्नुपर्दछ र:
(I) मूल रूप मा हुनुपर्छ
(ii) तपाइँको हालको ठेगाना, र
(iii) तपाईंको प्रस्तावित यात्राको लागतहरू कभर गर्नको लागि पर्याप्त रकमहरू उपलब्ध हुनुपर्छ। तपाइँको आवेदन भन्दा छिट्टै त्यहाँ कुनै एकल लम्बल लजिंग्ज हुनेछैन।
थप विवरणका लागि हेर्नुहोस् फारम.
आयरल्याण्ड गणतन्त्रमा भारतीय नागरिक आगन्तुकहरूको लागि एक आयरिश भिसा आवश्यक छ। उत्तरी आयरल्याण्डमा राष्ट्रिय भारतीय आगन्तुकहरूलाई युकेबाट भिसा चाहिन्छ। थप जानकारी र मार्गदर्शनको लागि, कृपया आयरल्याण्डको दूतावासको वेबसाइटमा जानुहोस्।
ब्रिटिश आयरिश भिसा योजना
नयाँ ब्रिटिश आयरिश भिसा योजना (BIVS) ले भारतीय आवेदकहरूलाई छोटो प्रवासको लागि अनुमति दिन्छ। तपाईं एक भिसासँग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ युके र आयरल्यान्ड दुबैमा र आसपास। चाहे यो बेलायत भिसा हो वा आयरिश भिसा तपाईले पहिलो भ्रमण गरेको देशमा निर्भर गर्दछ।
अधिक जानकारीको लागि कृपया आयरिश प्राकृतिककरण र आप्रवासन सेवा (INIS) भ्रमण गर्नुहोस्।
तपाइँको भिसा आवेदनको साथ मद्दत कसरी लिने?
तपाईं आफैंमा आयरिश भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईंलाई भिसा आवेदनको साथ मद्दत चाहियो भने तपाईं भरपर्दो भिसा सेवा मार्फत जान सक्नुहुन्छ। VisaHQ or आईवीसा। तपाईको राष्ट्रियता र तपाईसँग भएको समयमा निर्भर गर्दै, एउटा सेवा अर्को भन्दा सुविधायुक्त हुन सक्छ।
भिसाएचक्यूको साथ आयरल्याण्ड भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
IVIS को साथ आयरल्याण्ड भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
आयरल्याण्ड भिसाको लागि कसरी आवेदन दिने?
भिसा आवेदन को लागी कदमहरु:
पहिलो चरण भनेको तपाईलाई कुन भिसा चाहिन्छ भनेर पत्ता लगाउनु हो। त्यस पछि, एक अनलाइन आवेदन बनाउनुहोस्। तपाईं आयरिश सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा आवेदन फारम भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ आयरिश प्राकृतिकीकरण र आप्रवासन सेवा.
फारम भरे पछि, भिसा शुल्क तिर्नुहोस्। नोट गर्नुहोस् कि VFS ग्लोबल भिसा आवेदन केन्द्रहरूमा कुनै भिसा शुल्क वा सेवा शुल्क लाग्ने छैन। सबैभन्दा पहिले, वेबसाइटमा आफ्नो भिसा शुल्क र सेवा शुल्क तिर्न आफैलाई दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता प्रक्रियामा, तपाईंले आफ्नो विवरणहरू भर्नुपर्छ।
तपाईंलाई आफ्नो आवेदन लेनदेन नम्बर चाहिन्छ। आवेदन लेनदेन नम्बर आवेदन सारांश पाना मा छापिएको हुनुपर्छ। आफ्नो राहदानी नम्बर, म्याद सकिने मिति, र इमेल ठेगाना तयार राख्नुहोस्।
यस चरण पछि, तपाईं भुक्तानी भुक्तान गर्नु अघि "नियम र सर्तहरू" मा सहमत हुनुपर्दछ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि तपाइँ तपाइँको आवेदन को लागी अगाडि बढ्नुहुन्न, भिसा शुल्क फिर्ती योग्य छैन।
अब, तपाइँ तपाइँको नियुक्ति बुक गर्न पर्छ। तपाईंले आफ्नो भुक्तानी गरेपछि, तपाईंलाई आफ्नो नियुक्ति बुक गर्न विकल्प दिइनेछ।
सबै आवेदकहरूले भिसा आवेदन केन्द्रमा उपस्थित हुन अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्छ।
अन्तमा, तपाईंको अपोइन्टमेन्ट र भुक्तानी पुष्टिकरण रसिदको प्रिन्ट लिनुहोस्। तपाईंले भुक्तानी पूरा गरेपछि र अपोइन्टमेन्ट बुक गरेपछि मात्र यो गर्नुहोस्। तपाईंले भिसा आवेदन केन्द्रमा प्रिन्टआउट साथमा लैजानुपर्छ।
साथै, तपाईंको अपोइन्टमेन्टको दिनमा 15 मिनेट पहिले भिसा आवेदन केन्द्रमा पुग्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो कागजातहरू साथ ल्याउनुहोस्। भिसा आवेदन केन्द्रमा आइपुग्दा तपाईंले टोकन सङ्कलन गर्नुहुनेछ। तपाईंको टोकन नम्बर नहोउन्जेल पर्खनुहोस्।
भिसा फाइल गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि तपाईंले एक स्वीकृति रसिद प्राप्त गर्नुहुनेछ। कृपया तपाइँको रसिद होल्ड गर्नुहोस्, तपाइँका कागजातहरू पछि सङ्कलन गर्न आवश्यक हुनेछ।
आयरल्याण्ड भिसाको भिसा शुल्क के हो?
भिसाका लागि आवेदन दिनका लागि शुल्कहरू:
एकल प्रवेश भिसाको लागि, लागत माथि छ $ 81।
बहु प्रवेश भिसा शुल्क सम्म $ 136।
ट्रान्जिट भिसाको लागि, लागत सम्म छ $ 35।
दूतावासमा संकलन गर्नुभन्दा तपाई FedEx को लागी तपाईको भिसा पठाउन रोज्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं डीसी, मेरील्याण्ड, वा भर्जिनियाका निवासी हुनुहुन्छ भने:
तपाईंले फेडएक्स घरेलू रातोरात शुल्कको लागि अतिरिक्त $ १० तिर्नु पर्छ।
यदि तपाईं प्यूर्टो रिको वा क्यारिबियन टापुहरूमा बस्ने हुनुहुन्छ भने:
तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय फेडेक्स चार्जहरूको लागि $ २० को अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्छ।
दूतावासले भिसा र कुरियर शुल्क भुक्तानीको निम्न प्रकारहरू स्वीकार गर्दछ:
र क्यासियरको जाँच।
नगद वा क्रेडिट वा डेबिट कार्डहरू स्वीकार गर्न सकिँदैन।
सबै भुक्तानी 'विदेशी मामिला विभाग-आयरल्यान्ड' मा निर्देशित गरिनु पर्छ। यो तपाइँको अनुप्रयोग मा सामग्री संग समावेश गर्नु पर्छ।
आयरल्याण्ड भिसाको लागि कति बैंक ब्यालेन्स आवश्यक छ?
सार्वजनिक कोष वा आकस्मिक रोजगारीमा भर नपरिकन आयरल्याण्डमा आफूलाई सहयोग गर्नको लागि तपाईंसँग पर्याप्त रकम छ भनी तपाईंले देखाउनुपर्छ। तपाईंले देखाउनु पर्छ कि तपाईंसँग न्यूनतममा तत्काल पहुँच छ € 7,000।
कुन देशहरूलाई आयरल्यान्डका लागि भिसा आवश्यक छैन?
तपाईं आयरल्याण्ड प्रवेश गर्न भिसा चाहानुहुन्छ कि पनी तपाईंको राष्ट्रियतामा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईं एक यूरोपीयन आर्थिक क्षेत्र (EEA) को नागरिक हुनुहुन्छ। वा युरोपियन युनियनका २ 27 देशमध्ये कुनै पनिबाट सदस्य राष्ट्र। वा तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, र न्यूजील्याण्डबाट हुनुहुन्छ। त्यसो भए तपाईलाई आयरल्यान्डको भिसा चाहिदैन।
दक्षिण अफ्रिकाका पर्यटकहरू भिसा बिना रिपब्लिक आयरल्यान्ड आउन सक्छन्। तर उत्तरी आयरल्यान्डमा जान तपाईंलाई युके भिसा चाहिन्छ।
विदेश मामिलामा देशहरूको पूर्ण सूची छ जसका नागरिकहरू भिसा बिना आयरल्याण्ड भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ.
यदि तपाईंको देश यस सूचीमा छैन भने आयरल्यान्डमा तपाईंको स्थानीय दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि तपाईंको भिसा आवश्यकताहरू के हुन् भनेर पत्ता लगाउनुहोस्। यदि तपाईं उत्तरी आयरल्याण्ड भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, स्थानीय ब्रिटिश दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईं नि: शुल्क भिसा पाउनुहुनेछ यदि तपाईं यी देशहरूबाट हुनुहुन्छ भने:
इक्वेडर म्यासेडोनिया को गणराज्य
आयरल्याण्डमा प्रवेशका लागि भिसाका प्रकारहरू
Months महिना भन्दा कम अवधिको लागि, यदि तपाईं आयरल्यान्ड भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ भने। छुट्टीको लागि, छोटो अध्ययन कोर्सको लागी वा व्यापार बैठकहरूको लागि,aको लागि आवेदन दिनुहोस् छोटो स्टे 'सी' भिसा।
तपाई कि त एकल प्रवेश वा बहु प्रविष्टिहरूको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अधिकतम 'सी' छोटो प्रवासको भिसा अन्तर्गत रहन अनुमति छ 90 ० दिन।
यदि तपाईं 'सी' भिसामा राज्य प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भने, तपाईं राज्यमा विस्तारित रहन तपाईंको अनुमति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं फर्कन चाहानुहुन्छ भने तपाईले बाहिरिनु पर्छ र राज्य बाहिरबाट पुन: आवेदन दिनु पर्छ।
यदि तपाईं months महिना भन्दा बढि आयरल्यान्डको यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने,aको लागि आवेदन दिनुहोस् लामो-लामो 'D' भिसा। उदाहरणका लागि, अध्ययन वा कामको लागि पाठ्यक्रम पछ्याउन। वा आयरल्याण्डमा पहिले नै बासिन्दा भएका परिवारका सदस्यहरूसँग आयरल्याण्डमा बसोबास गर्न। त्यसपछि तपाइँ ए को लागी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ लामो-लामो 'D' भिसा।
यदि तपाईंसँग लामो प्रवास डी भिसा छ भने, तपाईं राज्यमा तीन महिना भन्दा बढीको लागि रहन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईले इमिग्रेसन अफिसरको प्रवेशमा आयरिश पोर्टमा प्रवेश गर्नु पर्छ। त्यहाँ तपाइँले दर्ता गर्न र निवास अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ।
केही देशका मानिसहरुलाई आवाश्यक हुन्छ ट्रान्जिट भिसापनि।
अर्को देश जाने बाटोमा, जब तिनीहरू आयरल्याण्ड पुग्छन्। तपाईंलाई ट्रान्जिट भिसाद्वारा पोर्ट वा एयरपोर्ट छोड्न अनुमति छैन। यदि तपाईं तलका कुनै पनि देशको नागरिक हुनुहुन्छ भने। राज्यमा अवतरण गर्दा, तपाईंलाई वैध आयरिश ट्रान्जिट भिसा चाहिन्छ:
कo्गो लोकतान्त्रिक गणराज्य,
भिसा छूट र पारस्परिक भिसा व्यवस्था
यो छोटो रहो भिसा छूट कार्यक्रम छोटो अवधिको बेलायत भिसा भएकाहरूलाई अनुमति दिन्छ। तिनीहरू आयरल्यान्डबाट आउन सक्छन् आयरल्यान्डबाट अलग भिसा बिना। धेरै पूर्वी यूरोपियन र एशियाई देशका नागरिकहरूले यसको लागि आवेदन दिन सक्छन्।
पुनः प्रवेश भिसा
तपाईंलाई जारी गरिएको पहिलो भिसा एकल राज्य प्रवेशको लागि मान्य हुनेछ। यदि तपाईं छोटो अवधिको लागि राज्य छोड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पुन: प्रवेश भिसाको लागि आवेदन दिन आवश्यक पर्दछ। यसमा राज्यमा प्रवेश गर्न पुन: प्रवेश भिसाको साथ उत्तरी आयरल्याण्डको यात्रा समावेश छ। पुन: प्रवेशको लागि भिसा प्राप्त गर्नु अघि। तपाईंले Garda National Bureau for Immigration (GNIB) मा दर्ता गर्नुपर्छ।
म कत्तिको चाँडो आईरिश भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छु?
आवेदकहरूले आफ्नो यात्रा मिति भन्दा 90 दिन अघि आवेदन दिन सक्छन्। दूतावासले तपाइँलाई तपाइँको यात्रा मिति कम्तिमा आठ हप्ता अघि आवेदन दिन सिफारिस गर्दछ।
आयरिश भिसाका लागि आवेदन दिन कति समय लाग्छ?
मेरो आवेदन रोकियो:
यदि तपाईंले आफ्नो आवेदन अस्वीकार गर्नुभयो र अझै आयरल्यान्डको यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ:
निर्णय गर्न को लागी वा
अर्को अनुप्रयोग बनाउनुहोस्
नयाँ अनुप्रयोगको लागि यसले तपाईंको अघिल्लो अनुप्रयोग ईतिहासको लेखा लिन सक्छ।
निर्णय गर्न सहारा
तपाईंले अस्वीकार गर्नुको कारणहरू उल्लेख गर्दै तपाईंलाई एउटा पत्र पठाइनेछ। यदि तपाईंलाई निर्णय गलत छ जस्तो लाग्छ भने, तपाईंले अस्वीकारको सूचना पाएको दुई महिना भित्र पुनरावेदन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ।
म कसरी अपील गर्ने?
तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको पत्रमा तोकिएको ठेगानामा लेखेर अपील गर्नु पर्छ। तपाईंले अपील मात्र दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंले साईन इन गर्नु पर्छ। हामी फ्याक्स वा ईमेल गरीएको अपीलको बारेमा विचार गर्दैनौं।
तपाईंको अपीलमा इनकारको लागि प्रत्येक मैदान बोल्नुहोस्
तपाईंको अपीलमा स्पष्ट र सान्दर्भिक समर्थन प्रमाणहरू प्रदान गर्नुहोस्
कुनै पनि थप जानकारी वा कागजातको साथ तपाईंको अपील पत्र समावेश गर्नुहोस्
सचेत रहनुहोस् कि अधिक जानकारी / कागजात प्रमाणित हुन ग्यारेन्टी छैन
अपील अधिकारीले तपाईंको अनुरोध समीक्षा गर्नेछ। उनीहरूले तपाईले प्रदान गर्नुभएको कुनै पनि जानकारीलाई ध्यानमा राख्नेछन्।
मूल निर्णय परीक्षा र समीक्षा पछि उल्टाउन सकिन्छ। जब अपील अधिकारीले निर्णय लिन्छ, उनीहरूले तपाईंलाई लिखित रूपमा सूचित गर्नेछन्। सामान्यतया, यसले 4-6 हप्ता भित्र निर्णय जारी गर्नुपर्छ।
त्यहाँ कुनै शुल्क छ?
अपीलको बसोबास चार्ज गरिएको छैन।
ब्रिटिश आयरिश भिसा योजनाआयरल्याण्ड भिसाको लागि कसरी आवेदन दिनेआयरल्याण्ड भिसा आवश्यकताहरूआयरिश भिसाआयरल्याण्ड भिसा भिसा शुल्कभिसा आयरल्यान्ड
इराकीहरुको लागी टर्की भिसा
भारतीयहरूका लागि माल्दिभ्स भिसा
इराकका लागि भिसा मुक्त देशहरू
भारत को लागी पर्यटक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
भारतीयहरूको लागि न्यूजील्याण्ड भिसा
फिजी को लागी भिसा
टर्की भिसा पाकिस्तानी नागरिकहरूको लागि
फेब्रुअरी 7, 2021
सिंगापुर टर्की भिसा
ALinks आश्रय लिंकहरू द्वारा समर्थित छ, एकजुटता जुन सबैको लागि विदेशमा यात्रा र बस्नेको बारेमा जानकारी साझा गर्दछ। शरणार्थी स्वागत छ!
नोभेम्बर 16, 2021
संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्कूली शिक्षा र शिक्षा
नोभेम्बर 20, 2021
डेनमार्कमा शरणका लागि कसरी आवेदन दिने?
भारतबाट क्यानाडा कसरी सर्ने? - क्यानाडा मा आप्रवासन
डिसेम्बर 1, 2021
भारतीयहरुको लागि UK भिसा !!
जापानमा कसरी काम पाउने ??
नोभेम्बर 26, 2021
सिंगापुरमा कसरी काम पाउने?
ग्रीस मा रोजगार कसरी खोज्ने?
फिजीमा बैंक खाता कसरी खोल्ने?
कृपया विजेट सेटिंग्समा ट्याब सामग्री चयन गर्नुहोस्।
अफगानिस्तान (13) सहायता (10) अल्बानिया (9) अष्ट्रेलिया (18) अस्ट्रिया (14) बैंक (31) क्यानाडा (23) चीन (17) डेनमार्क (12) फ्रान्स (16) जर्मनी (17) नजिकिदै गर (28) स्वास्थ्य (29) हङकङ (12) होटल (28) आवास (15) भारत (89) इराक (15) इटाली (22) जब (125) मलेसिया (13) मेक्सिको (27) पैसा (59) नाइजेरिया (12) नर्वे (13) पाकिस्तान (13) शरणार्थीहरू (55) रूस (16) साउदी अरब (9) विद्यालय (20) स्पेन (20) अध्ययन (38) स्विट्जरल्याण्ड (10) थाईल्याण्ड (13) सामान किन्नुहोस् (107) के कुराहरू (48) यात्रा (254) टर्की (30) यूएई (15) युगान्डा (9) UK (58) संयुक्त राज्य अमेरिका (37) उपयोगी लिंकहरू (23) भेनेजुएला (13) भिसा (152)
शरण लिंक fb पृष्ठ
युरोप ALinks fb पृष्ठ
अमेरिका ALinks fb पृष्ठ
पश्चिम एशिया र उत्तर अफ्रिका ALinks fb पृष्ठ
भारत ALinks fb पृष्ठ
पश्चिम अफ्रिका ALInks fb पृष्ठ
दक्षिण र मध्य एशिया ALinks fb पृष्ठ
पूर्व, मध्य र दक्षिणी अफ्रीका ALinks fb पृष्ठ
पूर्वी एशिया र दक्षिण पूर्व एशिया ALinks fb पृष्ठ